Global Voices teny Malagasy · 6 Desambra 2008
06 Desambra 2008
Tantara tamin'ny 06 Desambra 2008
Kroasia06 Desambra 2008
Pakistana06 Desambra 2008
Peshawar, renivohitry ny faritany avaratra andrefan'ny sisintany any Pakistan no tratran'ny fipoahana baomba mahery vaika androany [zoma]. Nitoby teo akaikin'ny trano fivoriana ilay fiara izay miaty fitaovana mora mipoaka 30-40 KG. Tsy fanafihana famonoantena ity satria tsy nisy olona tao anatin'ny fiara. Araka ny tatitra farany nataon'ny Polisy dia voamarina...
Senegaly: Fikorontanana an-tsekoly
Senegal06 Desambra 2008
Maro ny mpanao gazety sy mpamaham-bolongana Senegaly no mitodika amin'ny fanamby lehibe atrehina amin'ny fitaizana ny ankizy any Senegaly. Ao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny vohikala vaovao PressAfrik [fr], no anoratan'i Awa Diédhiou fa “Tandindonin-doza ny sekoly Senegaly”, satria maro amin'ny sekoly – indrindra ny ao Dakar – no manakaiky loatra ny...
Ejipta06 Desambra 2008